Motorola Moto G30 na Moto E7 Ike: leaks, sụgharịrị na ndị ọzọ | Gam akporosis
Motorola Moto G30 na Moto E7 Ike: Leaks, Renders na More
Mwepụta nke Moto G30 na Moto E7 Ike dị nso. Ọ bụ ezie na anaghị atụ anya na a ga-ewepụta ekwentị ndị a n'otu oge, ihe niile na-egosi na oge ga-adị mkpụmkpụ ga-adị obere. N'aka nke ya, ha abụọ ga-adị nso ịmalite ya na ahịa, yabụ enweelarị ikuku ikuku nke atụmanya gbasara ngwaọrụ ndị a.
Tupu anyị amata ụbọchị ị ga-ewepụta ha abụọ, anyị amatala ọtụtụ nkọwa gbasara atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke ụzọ a. Edebewokwa nsụgharị ya, yana ndepụta nke Moto E7 Power nke si na Geekbench pụta, ikpo okwu mkpanaka nke nwalere ya ma wepụta ya n'okpuru aha koodu nwere Mediatek processor chipset.
Ihe niile anyị maara banyere Motorola Moto G30 na Moto E7 Power ruo ugbu a
Ka anyị jiri nke a malite Moto G30 si Motorola. Ngwaọrụ a, dịka asịrị na nchapu nke malitere n'oge na-adịbeghị anya, ga-enwe ihu igwe teknụzụ IPS LCD nke ga-enwe diagonal nke 6.5 sentimita asatọ. Mkpebi nke a ga-abụ HD +, ikekwe pikselụ 1.600 x 720. Tụkwasị na nke ahụ, nhazi panel ga-ahụkarị: ọkwa mmiri na-acha ọkụ na obere ọkụ.
Ndị na-enye ihe ngosi nke leoto Moto G30
N'aka nke ọzọ, a na-ekwu na usoro mkpanaka nke a ga-etinye n’okpuru mkpuchi ekwentị a ga-abụ Qualcomm si Snapdragon 662, isi asatọ na-arụ ọrụ na oke ume ọhụrụ nke 2.0 GHz, ebe nha ya bụ 11 nm. A jikọtara nke a na 6 GB RAM na 128 GB ohere nchekwa dị n'ime, ọ bụ ezie na akụkọ ọzọ okenye na-egosi na nhazi ebe nchekwa ahụ ga-abụ 4 GB nke Ram na 64 GB nke ROM.
Moto G30 batrị ga-enwe ikike nke 5.000 mAhAgbanyeghi na ekwughi ihe obula gbasara ugwo ososo nke ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ekwuru na ọ ga-enwe ike ịgba ụgwọ site na ọdụ USB-C, ebe a ga-enwekwa jaketị ekwe ntị 3.5mm, onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ, na njikọ NFC.
Isi igwefoto usoro nke mobile ga ihe 64 MP quad modul nwere oghere oghere sara mbara na sensọ abụọ MP 2 maka nnukwu na bokeh gbaa. Onye na-agba n'ihu ga-abụ mkpebi 13 MP.
Dabere na Moto E7 Ike, enwere kwa ozi di uku. A na-ekwukwa na ihe nlere a ga-enwe nhazi ihuenyo nwere ọkwa n'ụdị mmiri mmiri. Nke a ga-abụ teknụzụ IPS LCD IPS ma nwee nha nke sentimita 6.5. N'aka nke ya, mkpebi ahụ ga-abụ HD +.
Renders nke leaked Moto E7 Ike
Ruo oge ụfọdụ, e kwenyere na ụdị a ga-abịa na Mediatek's Helio G25, mana ihe ndepụta Geekbench kachasị ọhụrụ gosipụtara banyere ya na-egosi na Helio P22 ga-abụ ibe nke ga-eji ike zụọ ya. A ga-ejikọ ihe a na ebe nchekwa RAM 4 GB na ebe nchekwa nchekwa 64 GB, ọ bụ ezie na a na-ekwu na a ga-enwe ọdịiche dị na 2 GB nke RAM na 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime; N'ebe a, anyị amaghị ma ọ bụrụ naanị otu ụdị ga-adị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-abata na ụdị ncheta ahụ, mana ọ doro anya na a ga-enwe oghere kaadi microSD maka mgbasa. Na mgbakwunye na nke a, ọ ga-abịa na batrị ikike 5.000 mAh.
Igwefoto igwefoto Moto E7 Power na-abịa dị ka ụzọ abụọ nwere oghere 13 MP bụ isi na onye na-agba egbe nke abụọ MP. Ihe mmetụta selfie ga-abụ 2 MP.
Ezie na e nweghị ndị na nkọwa ma na o kwere omume price nke Motorola Moto G30, Ekwuru na Moto E7 Ike ga-adị ihe dị ka euro 150 maka Europe. Ihe ọzọ ekwuru bụ ihe njikọ 3.5 mm, nke anyị anaghị atụ anya ka a hụ ya anya site na enweghị ya ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka ngwaọrụ dị ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola Moto G30 na Moto E7 Ike: Leaks, Renders na More
Nyere umuaka ato ahu aka site na uwa ohuru n'ime Tọgharia Uwa
Samsung Galaxy S21 nwetara mmelite ọhụrụ na ndozi ahụhụ na njikarịcha